Famerenana aorian'ny fiterahana mafy
Ny famerenana amin'ny laoniny rehefa bevohoka be dia be dia be. Araka ny fantatra, miaraka amin'ny fanoherana io fahafatesana io dia mihatra amin'ny fahafatesana ny foetus amin'ny fahazazana, hatramin'ny 20 herinandro.
Ahoana ny fitsaboana ny fitondrana vohoka tsy voatsabo?
Ny fanarenana ny vatana mandritra ny fotoana maharitra aorian'ny fampangatsiahana vohoka dia arahin'ny fitsaboana ara-pahasalamana.
Ny asany lehibe indrindra dia ny misoroka ny fampandrosoana ny fanasitranana ao amin'ny lavaka fananganana. Raha ny marina, matetika, hatramin'ny fotoana hamonoana ny foetus amin'ny fanadiovana, mihoatra ny iray andro dia afaka mandalo. Na izany aza, amin'ny ankapobeny, io trangan-javatra io dia miaraka amin'ny fahasarotana toy izany ho toy ny fandatsahan-dra, amin'ny fametrahana ny antony nahatonga azy ho efa maty ny foetus.
Rehefa avy nanamarina ny fizotran'ny "fitondrana vohoka", dia alefa haingana araka izay azo atao ny fako. Ity fanodikodinana ity no fomba lehibe indrindra amin'ny fitsaboana ity korontana ity.
Ahoana ny fanarenana aorian'ny fetal?
Rehefa manadio amin'ny vohoka mangatsiaka ao amin'ny vatana, dia manomboka ny fanarenana ny endometrium uterine. Ity dingana ity dia mitaky 3-4 herinandro, saingy tsy midika izany fa iray volana taty aoriana dia misy vehivavy afaka manomboka manomana ny fitondrana vohoka manaraka.
Ny zava-misy dia ny fitrangan'ny vanim-potoanan'ny reny taorian'ny fanasitranana ilay fitondrana vohoka dia maherin'ny 2-3 volana aty aoriana, izay mahatonga azy ho sarotra ny hitoe-jery. Nandritra io fotoana io dia nahazo fanafody hormonina ilay vehivavy, izay ahafahana manitsy ny lozam-pandrenesana hormonina. Matetika dia matetika ny ravina dia afaka 6 herinandro aorian'ny fandidiana.
Ankoatr'izay, eo amin'ny sehatry ny fitsaboana voalohany, raha mbola any amin'ny toeram-pitsaboana, dia manao fitsaboana antibiotika ilay tovovavy. Ny tanjona dia ny hisorohana ny fahasarotana sy ny aretina, izay azo atao amin'ny fanadiovana ny valanaretina uterine.
Araka izany dia azo lazaina fa mila 4-6 volana ny famerenana ny taova amin'ny taovam-pananahana.
Aretina amin'ny fery mandritra ny fitondrana vohoka
Vovoka fihenam-bidy ho an'ny vehivavy bevohoka
Firaisana taorian'ny fivalozana
Hazavana kely mavokely mandritra ny fitondrana vohoka
Famafàna marika miaraka amin'ny laser - vahaolana haingana indrindra amin'ny olana
Ny anjara asan'ny calcium ao amin'ny vatana
Rye as siderat - rehefa handavaka?
Bibikely vy - tsara sy ratsy
Ahoana no hahatonga ny ankizivavy mahira-tsaina?
Ny zaridaina maorisy - tanjona lamaody amin'ny lamaody
Fikajiana ny atin'ny trano manokana
Pamela Anderson indray dia nitondra sakafo antoandro ho an'i Julian Assange
Lalao ho an'ny ankizy 2-3 taona
Sofa ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny